बच्चालाई कसरी लाग्छ जंकफुडको लत ? – Online National Network
बच्चालाई कसरी लाग्छ जंकफुडको लत ?
१ चैत्र २०७४, बिहीबार १३:५७
अहिले धेरैजसो बालबच्चा जंकफूडको लतमा छन् । चिजबल, कुरकुरे, लेज, चिप्स, चाउचाउ जस्ता केही न केही बजारको खानेकुरा खाएकै हुन्छन् । प्याकेटमा बन्द गरिएका वा प्रसोधित खानेकुरमा उनीहरुको जिब्रो लोभिन्छ । बुवाआमाले पनि टिफिनको रुपमा वा बिहान-बेलुकीको नास्तामा यस्तै खानेकुरा ख्वाइरहेका हुन्छन् ।
किन जंकफूड रुचाउँछन् बच्चाहरु ?
बच्चाहरुले जंकफूड किन रुचाउँछन् ?
किन बच्चामा जंकफूडको लत लाग्यो ?
अक्सर बच्चालाई छिटो-छरितो खानेकुरा/टिफिनको रुपमा जंकफूड दिइन्छ । चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट दिने गरिन्छ । यसले अभिभावकलाई हल्का हुन्छ । उनीहरुले अन्य खानेकुरा बनाउन झन्झट मोलिरहनु परेन ।
बच्चालाई समय तालिका अनुसार खाना खान दिइदैन । उनीहरु भोकाउँछन् । तर, उनीहरुले आफुलाई भोक लागेको भन्ने बुझ्दैनन् । जब भोक लाग्छ, उनीहरुको मस्तिष्कमा खेल्ने भन्दा खानेकुराको झल्को आउन थाल्छ । खानेकुराको तृष्णा लाग्न थाल्छ । त्यसपछि उनीहरुले मिठो-मिठो खानेकुराको परिकल्पना गर्न थाल्छन् । मिठो खानेकुराको रुपमा उनीहरुले टिभीमा देखेका वा पसलमा सजाइएका खानेकुरा सम्झन्छन् । र, त्यही खानेकुरा माग्न थाल्छन् ।
यदि दिनभरको तालिका बनाएर उचित समयमा खाने बानी गराउने हो भने, उनीहरु जंकफूडको लतमा फस्दैनन् । सही समयमा, सही तरिकाले खानेकुरा दिनुपर्छ । अक्सर बच्चालाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म पाँच/छ पटक खानेकुरा दिन सकिन्छ ।